''DF lama ogeysiin Howlgalka France''
14 Jan 14, 2013 - 6:07:14 AM
Wasiirka Difaaca DF ayaa sheegay in howgalkii Ciidamada gaarka ah ee France ay ka fuliyeen Gobolka Shabeelada Hoose aan lagu soo wargelin isagoo sheegay in Dowlada Somalia aysan u dulqaadan doonin howgalo noocaas oo kale oo laga fuliyo gudaha dalka iyadoo aysan dowladu war u hayn.
Cabdixakiin Maxamuud X. Fiqi ayaa u sheegay warbaahinta Muqdisho inay Dowlada Somalia Cambaareynayso Howgalkaas, ayna Tacsi u dirayso dadkii Shacabka ahaa ee ku dhintay intii howgalku socday.
In ka badan 6-qof oo ay ku jirtay Haweeney Shacab ah ayaa ku dhintay Howlgalkaas oo fashilmay, waxaana sidoo kale lagu dilay sida ay Dowlada France sheegtay sarkaalkii la haystaha ahaa ee la doonayay in lasii daayo.
“Dowlada Somalia aad ayay uga xun tahay Howlgalkaas oo aan lagu soo war-gelin markii la fulinayay, Raalina kama noqon doonto in Howlgalo noocan oo kale laga fuliyo Dalka iyadoo aan lagu wargelin Dowlada” ayuu yiri Fiqi.
Wasiirku wuxuu sheegay in Dowlada Somalia ay dhowr jeer isku dayday inay gacanta Al-shabaab kasoo furato ninkaas, isagoo xusay in heshiisyadii hoose oo lagu furan lahaa ay diiday Al-shabaab.
Xukuumada Somalia ayaa iyaduna horay u soo saartay warbixin ay ku sheegtay in howlgalkaas ay cambaareynayso, iyagoo sheegay inay tacsi u dirayaan dhamaan dadkii ku geeriyooday oo ay ku jiraan askartii Faransiiska ahaa.
Ugu dambeyn Wasiirka Difaaca Somalia wuxuu sheegay in hadii howgalkaas lala socodsiin lahaa Dowlada Somalia in sidan oo kale aysan waxba noqon lahayn, wuxuuna hadalkiisa ku daray inaysan ogolaan doonin in mar kale uu ka dhaco dalka howlgal aysan dowladu ogeyn.